Ebe Ntanetị Ịntanetị India - Online Casino bonus codes
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị Ịntanetị India
Loading ... Iwu ndị metụtara ịgba chaa chaa na India adịghị akọwapụta ya. Ọtụtụ ụdị ịgba chaa chaa na mba ahụ ka edepụtara dịka iwu ịgba chaa chaa nke 1867 na-egbochi ọrụ ma ọ bụ ileta casinos na obere ihu ihu ma ọ bụ oge mkporo.
Ruo ugbu a, mba ahụ enweghị iwu doro anya banyere ịgba chaa chaa. Egwuru egwu na-eme n'India nwere ike ịbụ na iwu atọ: Sikkim, Goa na Daman. Na Goa enwere casinos asaa dị na ala bụ ndị a na-etinye igwe nsị. Egwuregwu Kọlọtọ na-anọ n'ụgbọ mmiri cha cha ise na-asọba n'ụsọ Osimiri Mandovi na casinos nke dị na Sikkim.
N'oge na-adịbeghị anya, na August 2016, na Macau meghere ụgbọala kachasị oké ọnụ n'ụwa Wynn Palace, bụ nke ihe owuwu ụlọ ya dị na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ịgba chaa chaa ma jiri dollar 4.2. E nwere lotiri, ma n'ọtụtụ ndị ọzọ a machibido ha iwu na ise India. Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu na-adịghị mma, bụ nke Ụlọikpe Kasị Elu kwuru na ọ bụ egwuregwu nke 1996.
Ndepụta nke saịtị 10 Indian Online Casino
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet India
Ebe ọ bụ na gọọmentị adịghị enye ikike iji rụọ ọrụ na ịgba chaa chaa n'ịntanetị na India, obodo ahụ bụkwa otsutstvuetyut iwu nke a na-ejikarị n'ịgba chaa chaa n'Ịntanet. Ebe ọ bụ na iwu ịgba chaa chaa na mbara igwe kachibidoro n'ọtụtụ nke India, ọtụtụ ndị kwenyere na nke a na-emetụta ịgba chaa chaa n'ịntanetị. Mana enweghị ụkpụrụ iwu siri ike na mpaghara a, nke ga-egbochi ndị ịgba chaa chaa India na-egwu n'Ịntanet, n'ihi ya ha na-eme ya n'oge niile.
N'oge ahụ, Sikkim bụ nanị ógbè India, nke na-arụ ọrụ n'ahịa ịgba chaa chaa n'ịntanetị, na n'oge okpomọkụ 2015, ọ meghere ụlọ ọrụ ịntanetị n'ịntanetị na India. Sikkim bụkwa onye ndú na ya Super Lotto Sikkim. N'ịbụ nke a tọrọ ntọala na 2002, ịgbarị ahụ ka bụ nanị ebe ndị ịgba chaa chaa na-akwụ ụgwọ na obodo.
N'agbanyeghị ikikere nke ịnye ikikere ụdị dị iche iche nke ịgba chaa chaa na ịkụ nzọ egwuregwu dịka iwu nke ịgba chaa chaa Sikkim (2008) na usoro ịgba chaa chaa Sikkim (2009), ọ nweghị onye ọrụ ahụ enyechara ikikere. Ya mere, ndị India na-egwu egwuregwu nke poker na bingo, ịkụ nzọ egwuregwu na online casinos na-amanye iji saịtị ndị ọzọ na ịgba chaa chaa online.
N'otu oge ahụ, ndị na-agba chaa chaa Ondiyskie na-echepụta na ntinye nke nkwụnye ego n'ihi eziokwu ahụ bụ na azụmahịa ego kpọmkwem n'etiti ndị bi India na ebe ndị ọzọ na-agba chaa chaa na-agba chaa chaa n'Ịntanet. Na May 2011, India nakweere iwu gọọmenti etiti gbasara nkà na ụzụ, nke gụnyere ndokwa ụfọdụ iji gbochie ịgba chaa chaa n'ịntanetị ma tinye ya na ndị na-ahụ maka Ịntanetị maka igbochi saịtị nke ịkụ nzọ n'ịntanetị na egwuregwu.
Ịgba chaa chaa na saịtị na-anabata ndị si India
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị nke na-anabata ndị si India, ma nye ha egwuregwu dị elu ma dị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ.
I nwekwara ike gụọ nyocha anyị banyere saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ nkwụnye ụgwọ dị maka ndị si India.
0.1 Ndepụta nke saịtị 10 Indian Online Casino
2.1 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet India
2.2 Ịgba chaa chaa na saịtị na-anabata ndị si India